पूर्वपदाधिकारी सुविधै सुविधा , पूर्वसांसदलाई निःशुल्क उपचार ! « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
पूर्वपदाधिकारी सुविधै सुविधा , पूर्वसांसदलाई निःशुल्क उपचार !
१ आश्विन २०७४, आईतवार १७:०८
काठमाडौ । ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन–२०७४’ आज उपसमितिकाबाट पारित भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य समितिअन्तर्गत रहेको उपसमितिको आज बसेको बैठकले सो विधेयक पारित गरेको हो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘पूर्वपदाधिकारी’ भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री÷मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विधानसभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष भई निवृत्त व्यक्ति बुझाइने उल्लेख छ ।
प्रकाशित : १ आश्विन २०७४, आईतवार १७:०८